Raayyaan Ittisa Biyyaa Itiyoophiyaa Miseensota ISIS To’annaa Jala Oolchuu Isaa Beeksise
Fulbaana 11, 2019
Jeneraal Biraanuu Juulaa
Raayyaan ittisa biyyaa Itiyoophiyaa miseensota ISIS to’annaa jala oolchu isaa fi kanneen hin qabamin jiranis cimsee hordofaa jirachuu itti aanaa hoogganaan humnoota waraanaa Jeneraal Biraanuu Juulaa beeksisaniiru.
Raayyaan waraana biyyaa itti miira itti gaafatama guddaa dhaan biyyaa fi uummata balaa irraa eeguuf hojjetaa jiraachuus yaadachiisaniiru.
Jeneraalichi gaazexaa Addis Zemen waliin gaaffii fi deebii geggeessaniin, ISIS Itiyoophiyaa keessa bakka garaagaraatti socho’uuf irra deddeebi’uun yaalii godhee duraa fashalus, naannolee biyyattii keessaa kan fo’ate, leenjii kan fudhatanii fi falasama isaan namoonni cuuphaman jiraachuu mootummaan sirriitti beeka jedhan.
Yeroo ammaa miseensonni ISIS maal gochaa akka jirdan, eessa eessatti sochii gochaa akka jiran, eenyu waliin hariiroo akka qaban, magaalaalee keessa kan jiran namoonni isaanii eenyuun akka ta’an, maal hojjetaa akka jiran, karoorri isaanii maal akka ta’ee fi ka biroo illee dhimmootii ibsuun hin barbaachifne illee hordoffii cimaan irratti geggeessamaa jira jedhan Jeneral Biraanuun. ISIS Itiyoophiyaa seeneera jechuun isaa uummata shorokeessuuf yaadee kan itti gargaarame waraana yaada sammuu ti kan jedhan jeneraalichi, uummati Itiyoophiyaa kana sodaatee kan rifatu miti, Iriyoophiyaa keessa seenee ISIS duulan oofa dandeettii jedhu hin qabu jechuu isaanii maddi oduu sabaa himaa mootummaa beeksisee jira.